शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या अगाडिको सनसनीपूर्ण भिडियो - अभियान खबर
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या अगाडिको सनसनीपूर्ण भिडियो
जानराखौँ, कुन राशि भएका व्यक्तिको यौन व्यवहार कस्तो ?
Posted on December 1, 2018 Author abhiyaan
धेरै मानिसहरुको यौन व्यवहार फरक फरक हुन्छ । यौन व्यवहारलाई फरक देखाउनुमा राशिको पनि केही भूमिका रहन्छ। राशिअनुसार कस्को यौन व्यवहार कस्तो भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यो कुरा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ। बास्तुशास्त्रका अनुसार थाहा पाउनुहोस् कुन राशि भएका व्यक्तिको यौन व्यवहार कस्तो : मेष राशी मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा आउँछन मेष राशिका मानिसमा […]
Posted on July 4, 2019 Author abhiyaan
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो ठेक्का निर्णयमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटला भएको पाइएको छ आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटला भएको हो । तीन प्रतिशत कामका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । जबकि […]
रामहरि खतिवडाको काउन्टर : कांग्रेस नभएको भए कुन म्युजियममा हुन्थ्यौ बैगुनी बाबुराम ?
Posted on May 18, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता रामहरि खतिवडाले कांग्रेसलाई म्युजियममा राख्नुपर्ने भाषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईलाई काउन्टर दिएका छन् । गोरखामा कांग्रेसकै भोट पाएर चुनाव जितेका बाबुरामले गुन बिर्सिएर ‘बैगुनी’ भएको खुलासा गर्दै नेता खतिवडाले बाबुराममा दम्भ पलाएको बताए ‘सत्तारुढ उपेन्द्र यादवसँग एकता गरेपछि तपाईंमा दम्भ पलायो । तर कांग्रेसले भोट नदिएको भए कुन म्युजियममा हुन्थ्यौ […]
चट्याङ्ग र आकस्मिक बाढीको खतरा !